ဇန်နဝါရီလ 2015 |4၏စာမျက်နှာ 17 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 4)
ယူနီဆက်ဗြိတိန်ရွေးချယ် Aframe ရဲ့တိမ်တိုက်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းဗီဒီယိုစီမံကိန်းများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တိုးပေးရန်ကူညီပါရန်
Aframe ၏ cloud ပလက်ဖောင်းဘော့စတွန်နှင့်လန်ဒန်၏အသုံးပြုမှုကို ဖြတ်. ၎င်း၏ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်ပူးပေါင်းနှင့်ထိရောက်စွာရရှိ (PRWEB) ဇန်နဝါရီ 27, 2015 ယူနီဆက်ဗြိတိန်က၎င်း၏ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကိုလှုပ်ရှားမှုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ Aframe ၏ cloud ကဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ယူနီဆက်ဗြိတိန်ဖန်တီးမြှင့်တင်ရေးအကြောင်းအရာနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဇာတ်ကားအပါအဝင်ဗီဒီယို၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံစီမံခန့်ခွဲ။ အတူလုပ်ကိုင်မတိုင်မီက ...
Unlimi-Tech မှ FileCatalyst များအတွက်Emmy® Award ဆုလက်ခံ
Unlimi-Tech မှ Software များ, Inc, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် FileCatalyst, မြန်အောင်လုပ်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာ၏ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးရှေ့ဆောင်တစ်ဦးEmmy®အနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ: Unlimi-Tech မှEmmy® FileCatalyst Ottawa အဘို့ဆုချီးမြှင့်, ကနေဒါ, 27 ဇန်နဝါရီလ 2015 လက်ခံ အဆိုပါရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မှာပါတဲ့ဆု။ အဆိုပါဆုချီးမြှင့်, IP ကိုကျော်လုံခြုံ Accelerator ဖိုင်မှတ်တမ်းလပ်ြရြားမြအဘို့, 66th နည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာမှာတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ...
Brit ဘင် Wilkins Whiplash များအတွက် BAFTA, အော်စကာနှင့် AMPS ဆန်ခါတင်ဖြစ်ပါသည်
လန်ဒန် 27 ဇန်နဝါရီလ 2015 ငါ့ထံသို့တန်ခိုးကြီးသောကောင်းမွန်သောအသံ - ကြောက်မက်ဘွယ်သောအသို့မဟုတ်နူးညံ့ကြင်နာမှု၏အသံသည်, တစ်ဦး ripsaw တစ်ခုသို့မဟုတ်ဂယက်ထ, ခံစားချက်မှအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်, ဇာတ်ကြောင်းကို arc, ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဗြိတိန်သံကိုအင်ဂျင်နီယာများအတွက်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုလျှင်မြန်စွာကိုအကောင်းဆုံးအကြားဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းကိုထူထောင်ခဲ့ကြ အာရုံပယောဂ၏သူတို့အားအလွန်အရေးပါ-bits ပို့ဆောင်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ။ တစ်ဦးအမှု ...
pixel ပါဝါ BVE 2015 မှာထုတ်လွှင့်နဲ့ post များအတွက်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အလိုအလျောက်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြသ
pixel ပါဝါမြင့်သောထိရောက်မှုနှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရပလေးအောက်ကိုကင်းဘရစ်, 2015 ဇန်နဝါရီလ 27 ပို့ဆောင်အစစ်အမှန်အချိန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် BVE 2015 အလိုအလျောက်စနစ်များမှာထုတ်လွှင့်နဲ့ post များအတွက်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အလိုအလျောက်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြသထားတယ်: pixel ပါဝါ, ထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်၏ဆန်းသစ်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, အသုံးပြုနေသည် ဂရပ်ဖစ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ် BVE 2015 မှာယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင် ...
တိုရွန်တိုအတွက်နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဟန်ပြဇန်နဝါရီလ 29th ကိုင်ထားရန်ဆင်းမ်ကဒ် Group မှ
TORONTO- အဆိုပါ SIM ကဒ် Group မှကင်မရာများ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟု 10th နှစ်ပတ်လည်ဆင်းမ်ကဒ်နည်းပညာဟန်ပြမှာမျက်ကပ်မှန်, အလင်းရောင်, post ကိုထုတ်လုပ်မှုဂီယာနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များကိုတိုရွန်တိုအတွက်ဇန်နဝါရီလ 29th ဘို့စီစဉ်ထား။ အဆိုပါလူကြိုက်များအဖြစ်အပျက်, ဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေဆနျးစစျဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှု၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းထောက်ပံ့သက်သေကိုဦးဆောင်အစွန်းနည်းပညာဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ထံမှထွက်ရှာတွေ့ ...
သိမ်းယူမှု, Dynamic ကြော်ငြာ INSERT နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး '' အဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်စွမ်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါပိုကောင်းစေပါတယ် Just-in-အချိန်ထုပ်ပိုးနှင့် Cloud DVR နည်းပညာဆက်သွယ်ရေး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီဗီကွန်ယက်ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြော်ငြာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ထုတ်လွှင့်စခန်းများ, Multichannel ဗီဒီယိုက programming ကိုဖြန့်ဖြူး, အစိုးရများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်, ယနေ့, က RGB ကွန်ယက်, Inc ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆည်းပူးရန်သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
ထုတ်လွှင့် Pix နယူးဗြိတိန်ဖြန့်ဖြူးအဖြစ် Jarvis မီဒီယာကြိုဆို
Billerica, မက်ဆာချူးဆက် - အသံလွှင့် Pix ™ယနေ့ကြောင့်ဗြိတိန်ပြန်လည်ရောင်းချသူများရုပ်သံလိုင်းမှသီးသန့်က၎င်း၏ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့, Jarvis မီဒီယာ, East Sussex, အင်္ဂလန်အခြေစိုက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဦးဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူပူးပေါင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ Jarvis မီဒီယာသော Vox ™အသံ automated တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု option ကိုအတူအသံလွှင့် Pix ရဲ့ Flint ™နှင့် Mica ™ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ထုတ်ကုန်လိုင်းများဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ် ...
HDE-8C-QAM Option ကို2ဗီဒီယိုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Institutional HD ကိုကျော်ဟများထံသွားရောက်ကာဖြန့်ကျက် OLD တံတား BRIDGE, NJ အတွက်အသုံးပြုမှုများအတွက် Approved နှင့်အတူ - ဇန်နဝါရီ 26, 2015 - Blonder လျှာ Laboratories, Inc (NYSE စျေးကွက်: BDR) ယနေ့ကုမ္ပဏီ၏ HDE-8C ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Opt2အန်ကုဒ် / w -QAM ယခု high-definition (HD ကို) တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အတည်ပြုအဓိကအမေရိကန်ဂြိုဟ်တုဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားပံ့ပိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့ဟများထံသွားရောက်ကာအခြေခံအဆောက်အအုံကျော် deployments ။ အဆိုပါယုံကြည်စိတ်ချရ ...
4 ၏စာမျက်နှာ 17«ပထမဦးစွာ...«23456 » 10...နောက်ဆုံး»